गुगल, माईक्रोसफ्ट, फेसबुक र इन्स्टाग्राम पसल र स्टोरहरू डेविड ब्रिडबर्ग - पोस्ट आधुनिक ग्यालरी
डेभिडब्रिडबर्ग जुन 6, 2021 जुन 6, 2021
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा बेयर हड्डीहरू
मेरो कला कहानी २०० 2006 मा फिर्ता जान्छ एक साधारण धारणाको साथ एक डिजिटल कलाकार बन्न। मेरो क्यारियर २०१२ मा आत्म अध्ययन संग शुरू हुन्छ। २०१ 2012 मा मेरो उत्तर आधुनिकताले फल फलाउन थाल्छ।
डेभिड ब्रिडबर्ग द्वारा रातमा
हड्डीहरू खुला राखिएको छ, म भोको कलाकार हुन चाहन्न।
पछिल्ला months महिनामा म किनमेल अभियानहरू सिर्जना गर्दैछु। पहिले माइक्रोसफ्ट शपिंगको साथ, त्यसपछि फेसबुक र इन्स्टाग्राम स्टोरहरूमा काम गर्दै। गुगल शपिंग द्वारा अब छिट्टै पछ्याईएको छ अब एक कामका बीचको स्ट्रिम।
प्रजनन प्रिन्ट व्यवसायमा हामी क्रिस्मसको समयमा भर पर्दछौं धेरै राम्रो आरओआई उत्पादन गर्नका लागि। नोभेम्बरमा शुरू गर्दै मेरो अभियान खर्च बढ्नेछ।
शपिंग अभियानहरू सिर्जना गर्ने र प्रबन्ध गर्ने प्रक्रियाहरू थाहा पाएर म रोजगार बजारमा परिवर्तन भएको छु।
टपटल मेरो सपना नियोक्ता हो। तर कहाँ सुरु गर्ने? म एक Google शपिंग प्रबन्धक, एक माइक्रोसफ्ट शपिंग प्रबन्धक र फेसबुक इन्स्टाग्राम स्टोर प्रबन्धक हुँ। हो मैले सिक्नु पर्ने कुरा धेरै छ। मसँग किन काम गर्ने? किनकि म यस बारे सिक्न र यी पसलहरूको लागि सिर्जना गर्न मन पराउँछु।
मेरो अनुभव ठूलो स्वतन्त्रकसँग काम गर्ने स्वतन्त्र तेस्रो पक्ष विक्रेताको रूपमा हो। यसको मतलब केहि कार्य क्षेत्रहरू छन्। मेरो फिडलाई विशेष म्यानुअल स्वीकृति आवश्यक छ। मसँग गँड्यौलाको आँखा दृश्य र प्रक्रियाको पक्षी आँखा दुबै छन्।
टपटलका ग्राहकहरूले मबाट राम्रो सेवा र हेरचाह पाउने थिए। मैले बुझें कि म धेरै काम गर्न प्रगतिमा छु। टपटलसँग काम गर्नु मेरो लागि ठूलो अवसर र सम्मान हुनेछ।
यस ब्लग पोष्टको लागि आवश्यकता छ मलाई केहि समस्या सामना गर्दै छ। सायद किनभने म मैदानमा यती नयाँ छु। आवश्यकता जुन म मेरो विशेषतामा टपटल पृष्ठमा लिंक गर्दछु। म कसरी अस्पष्ट छु कि टपटलले मेरो अनुभव वर्गीकृत गर्दछ। आवश्यकता पूरा गर्नका लागि म लिंक थप गर्नेछु यहाँ स्वतन्त्र ब्रान्ड रणनीतिहरु। ईमानदारी साथ मलाई मेरो कामको शीर्षकमा सहयोग चाहिन्छ। सामान्य क्यारियर बजारमा शिर्षकहरूको शिथिल सूची देखिन्छ।